Tarsan oo ka hadlay sababaha keenay in doodii maanta ee musharixiinta uu fashil kusoo dhamaado (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Tarsan oo ka hadlay sababaha keenay in doodii maanta ee musharixiinta uu fashil kusoo dhamaado (DHAGEYSO)
Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir ahna musharax haatan u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo goordhaw la hadlay warbaahinta ayaa faah-faahin dheeraad ah ka bixiyay wixii ka dhacay doodii doorashada musharixiinta madaxweyne ee maanta fashilka ku yimid.
Musharax Tarsan ayaa sheegay in dooddu aheyd mid ay dalbadeen shacabka Soomaaliyeed islamarkaana uu qorshaheedu ahaa in dhamaan dadka Soomaaliyeed si toos ah loogu baahiyo, si ay u ogaadaan musharixiinta iyo fikirkooda balse aysan taasi dhicin.
Wuxuu musharax Tarsan tilmaamay in howlihii warbaahineed oo dhan ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana guddigii doorashada madaxweynaha loo diiday in arrintaasi loo madax banaaneeyo.
Dhinaca kale, musharax Tarsan ayaa tilmaamay in wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) uu weli heysto TV-gii qaranka islamarkaana uu hantidii umadda weli ku takri falayo.
“Doodaan waxay aheyd dalab ka yimid shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana ay shacabka ku doonayaan inay ku arkaan fikirka musharixiinta, marka ma aysan dhicin taasi, waxaa warbaahinta lagu soo rogay in doodu aysan toos noqon, loona diido saxaafaddii kale, waxaa TV-ga qaranka la wareegay Xasan Sheekh iyo Maareeye, waxayna hadda soo rogeen in doodda aysan si toos ah noqon, waxayna rabaan inay jar-jaraan codadka oo intii ay rabaan sii deeyaan” Sidaasi waxaa yiri Tarsan.
Ugu dambeyntii, musharax Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay inay arrintaan ceeb iyo fadeexo weyn ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya, isagoona arrintaan ku sifeeyay inay tahay in dalka uu weli ka jiro musuq-maasuq aad u baahsan.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray musharax Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa kusoo beegmaya xilli maanta 12 musharixiin madaxweyne ay isaga baxeen dood wadaag loo qaban lahaa musharixiintaasi, kadib markii lasoo rogay in doodaasi aysan si toos ah u bixin, ayna saxaafadda kale baahin karin doodda.